လူနည်းစုအရေး အလေးမပေးက အလှမ်းဝေးမည် ဒီမိုကရေစီ (ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဘင်္ဂလီရခိုငf ခိုးဝင်တာလာ (သို့မဟုတ်) ဘင်္ဂလီမူစလင်ခိုးဝင်တလာ?
မိတ္ထီလာမြို့ အကြမ်းဖက်ခံရမှု ၂-လပြည့် ကာလတွင် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ထပ်မံကြုံတွေ့နေရ »
Tags: BBC, Burma, European Union, Muslim, Myanmar, Politics, Thein Sein
This entry was posted on May 19, 2013 at 4:34 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.